Stability 24 စွမ်းအင်နဲ့ ငွေ ချွေတာနိုင် – အကြိုးကြေးဇူးမြား, အသုံးပြုနည်း, ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံ, ကိုဘေးထှကျသကျရောကျမှု, စွေး
STABILITY သုံးရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက –
လေ့လာမှုတွေက အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သလို သိပ္ပံပညာအရလည်း ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည်တွေကို လျော့စေနိုင်တယ်။ အဲဒါတွေက ကေဘယ်ကြိုးနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကနေ ထွက်တဲ့အရာတွေပါ။
Stability ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့ သက်သာမှုနှုန်းများ
တိုက်ခန်း သို့မဟုတ် နေအိမ်အတွင်း ပုံမှန်လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကွန်ရက်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ထုထည် ၁၂ x ၇ x ၄ စင်တီမီတာ
ခံနိုင်ဝန်အား ၅ ကီလိုဝပ်- ၁၉ ကီလိုဝပ်(တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ခံနိုင်ဝန်အားနှင့် ညီမျှသည်)
အာမခံ ၁ နှစ်
အမြင့်ဆုံး စိုထိုင်းဆ – ၈၅% (ရေချိုးခန်းနှင့် ရေကူးကန်တို့တွင် မထားရ)
အလေးချိန် – ပါကင်အပါအဝင် ၁၇၀ ဂရမ်၊ ပါကင်မပါလျှင် ၁၂၅ ဂရမ်
Stability 24 ဆေးတိုကျ စွေး, အဘယျမှာဝယျပါရနျ
အဟောငျးစြေးနှုနျး 99980 MMK
အသဈသောစြေးနှုနျး 49990 MMK
လျှပ်စစ်မီတာခကို သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် သက်သာအောင် တရားဝင်နည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ဦးက စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။Stability 24 တကယ့်ရလဒ်အစစ်
ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်သူများ၊အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက ခုတလော မေးခွန်းတစ်ခုတည်းမေးနေကြတယ် – ဓာတ်အားချွေတာစက်က မီတာခတွေသက်သာစေတာ တကယ်ပဲလား တဲ့။ ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ်။ ဓာတ်အားချွေတာစက်က သင့်ရဲ့မီတာခတွေကို ၂ဆ – ၄ ဆ လောက်သက်သာစေပါတယ်။ .
ဒီပို့စ်ကိုမရေးခင် ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းက ကျွန်တော်အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက် ဒီစက်ကိုဝယ်တာတွေ့ခဲ့တယ်။ သူ့မီတာခတွေ လာပြတုန်းက ကျွန်တော် မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်လမှာ သူ့မီတာခက ၂ ဆခွဲပိုသက်သာနေပြန်တယ်။
သူက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလည်း ပုံမှန်အတိုင်း ဒါတွေပဲဆက်သုံးနေတာပါတဲ့။ သူ့မှာ ကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အချက်အပြုတ် အကုန်ပုံမှန်အတိုင်းသုံးတယ်။လျှပ်စစ်မီတာခအတွက် ငွေသိပ်ကုန်ခဲ့ရတာပါတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ယောက်ျားမသိအောင် Stability ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်တပ်တယ်၊ အရမ်းလွယ်တယ်၊ ဘေးကင်းတယ်။ သူက လျှပ်စစ်အကြောင်း ဘာမှမသိလို့ အားကိုးပါတယ်တဲ့။
Stability က ချက်ချင်းကိုအလုပ်လုပ်တော့တာ သူ့ယောက်ျားအံ့သြခဲ့ရတယ်။ စက်တင်ဘာမှာ သူတို့က ၆၃၈ ကီလိုဝပ်သုံးခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာမှာ ၂၅၈ ကီလိုဝပ်သုံးခဲ့တာဆိုတော့ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျော့သွားတယ်တဲ့။ .
Stability ရဲ့ထိရောက်မှုကို စမ်းသပ်မှုက အတည်ပြုခဲ့တယ်။
လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံမှာ ဒီလိုစက်ကလေးက ကြီးကြီးမားမားဓာတ်အားချွေတာပေးနိုင်မယ်လို့ မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကဲ သူဘယ်လိုလုပ်လဲ ကြည့်ရအောင်။
ထိရောက်တဲ့ဓာတ်အားချွေတာမှုနည်းပညာကို ဂျပန်မှာ တီထွင်ခဲ့တာပါ။ တယ်လ်ဆာ အပါအဝင် လျှပ်စစ်ကားတွေမှာ အတော်လေးသုံးခဲ့တယ်။ သူ့အိုင်ဒီယာကတော့ လျှပ်စစ်ပါဝါအသုံးပြုမှုကို အဆပေါင်းများစွာလျှော့ချပေးတဲ့ ကိရိယာအသေးလေးတစ်ခု ထည့်သွင်းထားတာပါပဲ။ ဒီနည်းပညာက သိပ်ကိုရိုးရှင်းပြီး စရိတ်လည်းသက်သာတော့ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့မှာ အိမ်မှာ၊ ရုံးမှာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ မီတာသက်သာအောင် သံလိုက်တွေ၊ တခြားကိရိယာတွေတပ်ထားစရာမလို၊ ခိုးသုံးစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒါတွေက အဓိပ္ပာယ်မရှိ၊ တရားမဝင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီပစ္စည်းက ပလပ်ထိုးပြီး သုံးလိုက်ရုံ လွယ်လည်းလွယ်ကူပါတယ်။
ကျွန်တော့ရဲ့စမ်းသပ်မှု Stability လို့ခေါ်တဲ့ ဒီစက်မော်ဒယ်တစ်ခုကို ဝယ်လိုက်တယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်ကနေ မှာလိုက်တာ ၃-၄ ရက်အတွင်း တိုက်ရိုက်လာပို့တယ်။
ဘူးထဲမှာ အဲဒီစက်လေးရယ်၊ အဆင့်နှစ်ဆင့် အသုံးပြုသူလက်စွဲအညွှန်းပါတယ်။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတိုင်း လုပ်လို့ရတယ်။
ဖုန်စုပ်စက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ချွေတာစက်ကို မသုံးခင်နဲ့ သုံးပြီးအချိန် (ကီလိုဝပ်– ပေးဆောင်ရမယ့် မီတာ) ဓာတ်အားဘယ်လောက်သုံးထားလဲ စစ်ကြည့်တယ်.
ချွေတာစက်ကို မချိတ်ခင်က ဝပ်မီတာက ၁၀၅၃ ဗို့အားရှိ ဖုန်စုပ်စက်ရဲ့ဆွဲအားကို ပုံမှန်ပြတယ် –
ချွေတာစက်ကို ချိတ်လိုက်တဲ့အခါ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို ထပ်စစ်ကြည့်တယ်။
ချွေတာစက်ကို ချိတ်ပြီးတဲ့နောက် တွေ့ရတာက ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုဟာ ထက်ဝက်ကို လျော့နေတာ။
ဒီလောက်လွယ်တဲ့နည်းကို မသိခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်ရှက်မိပါတယ်။
ဒီစက်ကို စပြီးသုံးတာ ၂ ပတ်ရှိပြီ။ ကနဦးရလဒ်တွေကို စစ်ရမယ့်အချိန်ပဲ – ၁၅ ရက်အတွင်းမှာ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသက်သာသွားတယ်။ ဆိုလိုတာက ခြောက်လလောက်ဆို ကျွန်တော့လစာချွေတာနိုင်လိမ့်မယ်။ မဆိုးဘူးမလား။ မိသားစုအတွက်၊ ကလေးတွေအတွက် ငွေအပိုထွက်လာတာကောင်းတာပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် ဒီစက်က တကယ်ကောင်းပါတယ်။အတည်ပြုပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအတွက်ကတော့ ဝဘ်ဆိုက်တွေအများကြီးကို သွားကြည့်ပြီးပြီ။ တွေ့ရသလောက်တော့ ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်မှာ ရှိတဲ့ Stability က ဈေးအချိုဆုံးပါပဲ။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေးနဲ့ အိမ်အရောက် တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါတယ်။
Stability အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ညွှန်းဆိုအကြံပေးချက်များ Stability 24 ပွနျလညျဆနျးစဈခကျြ, ဖိုရမျ
တခုခုပဲ။ ဒီစက်က အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ ရိုးရိုးပြောရရင် သူအကြောင်းသူများရေးထားကြသမျှကို မယုံခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်လလောက်သုံးကြည့်ပြီးနောက် သံသယတွေအကုန်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ Stability က ဓာတ်အားချွေတာဖို့ တကယ်အကူအညီပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဝဘ်ဆိုက်ညွှန်ပေးပါတယ်။
အရည်အသွေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစက တခြားဝဘ်ဆိုက်ကနေဝယ်တာ။ ဈေးသက်သာတာမက်ပြီးတော့လေ။ ဒါပေမယ့် အဲ့စက်က သုံးမကောင်းဘူး။ ၂ ပတ်ကြာတော့ ပျက်သွားတယ်။ အဲဒီနောက် ဒီဝဘ်ဆိုက်ကနေ နောက်တစ်လုံးထပ်ဝယ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက မီတာခ ထက်ဝက်သက်သာတယ်။ Stability ကြောင့် ငွေတွေအများကြီးချွေတာနိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။ သုံးတာလည်း ပစ္စည်းကအတူတူပဲ။အရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။
တိုက်ခန်းနဲ့ ရုံးခန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေပါပဲ။ အိမ်နဲ့ရုံးအတွက် တစ်ခုစီဝယ်ခဲ့တယ်။ အခုဆို တစ်လကို ၅ သောင်း–၆ သောင်းလောက်သက်သာနေတယ်။ ဒီတိုင်းသာဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ငွေအတော်များများစုမိတော့မှာပဲ။ ငွေသက်သာဖို့ သိပ်အဓိကမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တကယ်မသုံးတဲ့အရာတွေအတွက် ပေးနေရတာတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ထင်တယ်လေ။ ပိုက်ဆံတွေကို ဘာလို့လွှင့်ပစ်ရမှာလဲ။